ICD/CIM-10 B55 B55
ICD/CIM-9 085 085
Leishmaniasis, a wͻsan kyerεw no leishmaniosis yε yare a mmoawa bi a wͻte afoforo mu a wͻwͻ abusuakuw leishmania mu a wonya denam dͻte ntuboaso Yare no nam kwan abiεsa so da ne ho adi:honam yare, εhorow ne honam ani, anaa nipaduam leishmaniasis Honam ani de no da adi denam honam kuru ahorow so, bere a εhorow ne honam de da adi denam kuru wͻ honam ani, obi anum, ne ne hwenem, na nipaduam de da adi denam honam kuru ne afei atiridii, mogya a akͻ fam ne berεbo a ayε kεse so.
"Leishmania" ahorow bεboro aduonu na wͻde yare yi ma nipa. Nea εta de ba binom yε ohia, aduan pa a wonnya, kwae a wͻsεe no, ne kurow kεse mu tena. Yare abiεsa no nyinaa yε nea wobetumi de afidie ahu. Bio nso, wotumi hu nipaduam de no denam mogya mu a wͻhwehwε so.
Wobetumi asiw Leishmaniasis kwan denam ntama a wͻde aduru ahyε no a wͻdam. Akwan afoforo yε nnuru a wͻde kum ntummoa no ne nipa a woanya a wͻsa wͻn yare ntεm so. Ayaresa a wͻde ma gyina baabi a wonyaa yare no, "Leishmania" ko, ne yare ko. Nnuru a wͻde sa nipaduam yare no bi ne liposomal amphotericin B Nnuru yi nso - nnuru a n'hoͻden bͻ ho anum ne paromomycin, ne miltefosine. Ɛdefa honam ani de ho no, paromomycin, fluconazole, anaa pentamidine betumi ayε adwuma.
Mprempren, nipa bεyε ͻpepem dumien na wͻanya yare yi wͻ aman aduokrͻn awotwe so. Bεyε nipa ͻpepem abien na wonya yare yi foforo ne bεyε aduonu kosi aduonum na wͻhwere wͻn nkwa afe biara. Nipa bεyε ͻpepem ahanu wͻ Asia, Afrika, Amεrika Anaafo ne Mfinimfini ne Europa Anaafo na wͻtete mmeae a yare yi abu so. Wiase Akwanhosan Ahyehyεde(WHO) anya nteso wͻ nnuru a wͻde sa yare no bo ho. Yare yi betumi anya mmoa afoforo, ebi ne nkraman ne nkura.
Retrieved from "https://ak.wikipedia.org/w/index.php?title=Leishmaniasis&oldid=28437"
This page was last edited on 10 Ɔbenem 2022, at 18:35.